Fitsarana ny Maitre Olala Mety hofoanana
Fiaram-panjakana nanararao-pahefana Voasazy avy hatrany ilay Tale
Namoaka taratasy ofisialy fialan-tsiny omaly ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka ny Pr Rakotonirina Julio.
Lahatra Andriamahatsangy “Tena ilaina ny tanàn-dehibe vaovao saingy…”
Tena ilaina ny fisian’ny tetikasa tanàn-dehibe. Ny fahitako azy amin’ny ankapobeny,
Tsenan’asam-panjakana Misy zavatra tsy mazava momba ny FER
Hita tamina gazety mpiseho isan’andro iray omaly alarobia 21 aogositra ny antso tolo-bidy misokatra amina tsenan’asam-panjakana (Appel d’offre ouvert) mitondra ny laharana 003-DRAHTP/SRTP/BOENY/CP18/FER.2019.
Orinasa JIRAMA Mbola banga ny toeran’ny tale jeneraly
Mbola banga tanteraka ny toeran’ny tale jeneralin’ny orinasa JIRAMA amin’izao, taorian’ny fanesorana an’Atoa Jaomiary Olivier, tale jeneraly teo aloha, taorian’ny filakenkevitry ny minisitra farany teo.
Soarano sy Behoririka Nodiovina ny tanàna, nakisaka ireo mpivarotra mibahan-dalana
Araka ny vinan’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana eo amin’ny fiarahamonina eto an-drenivohitra, izay “ soa iombonan’ny Malagasy”
Fiaraha-miasan’ny CUA sy ny Masoivoho Indianina Hovelomina ny lalana Mahatma Ghandi sy Indira Ghandi
Nitsidika ara-pomba fifanajana ny ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana, tetsy amin’ny lapan’ny tanàna Analakely omaly maraina, ny ambasadaoro vaovaon’i Inde monina sy miasa eto amintsika, Atoa Abhay Kumar.
Alain Ramaroson Nivoaka ny fonja
Nivoaka ny fonjan’Antanimora omaly alatsinainy 20 aogositra tamin’ny 8 ora sy sasany alina Atoa Alain Ramaroson, rehefa notanana teny Antanimora nanomboka ny 3 aogositra 2016
Ny 31 jona izao no tokony hivaly ny fitsarana natao tao amin’ny fitsarana ambaratonga faharoa tetsy Anosy ny 23 jona teo mikasika ny raharaha Maitre Olala na ny mpisolovava Willy Razafinjatovo, raha tsy misy indray ny fiovana.
Raha tsiahivina, namoahan’ny holafitry ny mpisolovava didy tsy ahafahany miasa mandritry ny 2 taona ity mpisolovava ity ny volana jolay 2018 rehefa nivaly ireo fitarainana miisa 4 mikasika azy, 7 volana lasa izay. Nampakatra ny raharaha tamin’ny “cours d’appel” aho, hoy izy, vokatr’izany ary dia isan’ny fanazavana nentina nanoloana ny fitsarana ny alakamisy teo moa ny antony nitakiany hanafoanana ny fitsarana nataon’ny olafitra taminy. Avy amin’ny mpifanandrina tamin’ny olona narovany ny 3 tamin’ireo fitarainana azy tamin’izany ary dia nanazava izy fa asany amin’ny maha mpisolovava azy no miaro ny olona arovany. Lojika izany. Mikasika ilay fitarainana fahaefatra farany izay nilazan’ny filohan’ny olafitra tamin’izany ho fanalam-baraka kosa, hoy izy, ary nilazako fa tsy mahay ny asany io olona io satria toy ny miandry omby fa tsy manao asa fiarovana dia satria ny mpisolovava dia natao hiaro fa tsy hiandany amin’ny mpifanandrina. Naveriko taminy tamin’izay fa mampalahelo ahy ny olona mamonjy ity Batonier (filohan’ny olafitra) ity. Izy ihany moa tamin’izay no sady nitsara no nitory ary tsy mpitsara matihanina no namoaka ilay didy fampiatoana fa ireo mpikamban’ny olafitra. Tamin’ny 23 may teo kosa dia mpitsara matihanina ka dia matoky azy ireo aho. Mety ho foanana ny fitsarana tamin’ny 2018 satria sady mpitsara no mpitory no nisy tamin’izany ary tsy nampahafantatra ny zon’ny toriana akory, hoy hatrany ny maitre Olala. Izay rahateo moa no fangatahan’izy ireo raha nampikatra ny raharaha.